5 Qalab Cajiib ah oo loogu talagalay Waxyaabaha Yaryar ee Suuqgeynta Macluumaadka | Martech Zone
5 Qalab Cajiib ah oo loogu talagalay Waxyaabaha Yaryar ee Suuqgeynta Macluumaadka
Talaado, Janaayo 23, 2018 Jessica Theifels
Waxaan u arkaa naftayda mid yar oo xagga suuq-geynta ah. Ma jecli jadwalka isku dhafan, jadwaliyeyaasha iyo aaladaha qorsheynta - aniga ahaan, waxay howsha ka dhigayaan mid ka dhib badan sidii loo baahnaa. Maaha in la xuso, waxay ka dhigaan kuwa wax ka iibiya waxyaabaha adag. Haddii aad isticmaaleyso aalad qorshaynta kalandarka ka kooban 6 bilood ah - oo shirkaddaadu bixinayso - waxaad dareemaysaa inay waajib kugu tahay inaad ku dhegan tahay faahfaahin kasta oo qorshahaas ah. Si kastaba ha noqotee, suuqgeeyayaasha ugu fiican ayaa ah kuwo firfircoon, diyaar u ah inay beddelaan waxyaabaha ku jira sida jadwalka u beddelo, dhacdooyinka soo baxa ama codsiyada la sameeyo.
Anigu labadaba waxaan ahay nin yaqiin ah oo xariif ku ah shaqadayda, markaa inta aan wali ku tiirsanahay aalado yar oo cilmi baaris ah, qorshayn, tafatir iyo inbadan ah, dhamaantood waa toosan yihiin waana bilaash. Maanta waxaan la wadaagayaa dhowr ka mid ah kuwa ugu cadcad si aan kaaga caawiyo inaad yareyso culeyska dadaallada suuqgeynta waxyaabaha aad ka kooban tahay.
Loogu talagalay: Tifatirka Sawirka iyo Abuurista Sawirada
In kasta oo ay fiicnaan laheyd in la barto oo la isticmaalo aalad sida Adobe Photoshop oo loogu talagalay tafatirka sawirka, haddana ma haysto waqti aan ku barto, ama lacag aan ku bixiyo. Waxaan bilaabay adeegsiga Photoscape X (oo kaliya Mac; waan ka xumahay dadka isticmaala Windows) dhawr sano ka hor hadana waxaan ku tiirsanahay waxkastoo iyo dhamaan tafatirka sawirada ama sameynta sawirada aan sameeyo, taas oo ah wax badan.
Waan sameyn karaa tafatirka caadiga ah, oo ay ku jiraan wax-jarista, hagaajinta midabka iyo hagaajinta, iyo dib u qiimeynta Waxa aan inta badan u adeegsado Sawirada, si kastaba ha noqotee, waa tifaftiraha, halkaasoo aad ku dari karto qoraal, qaabab, midabbo, iyo in ka badan sawirrada. Tani waxay waxtar u leedahay abuurista sawirka bulshada, laakiin sidoo kale in fallaadho ama sanduuqyo lagu daro shaashadaha (sida sawirrada ku jira qoraalkan), taas oo muhiim u ah marka la qorayo qaybo ka mid ah casharrada ama la codsanayo isbeddelada naqshadeynta waxyaabaha aad ka kooban tahay.
Waxaan u isticmaalaa sawir-gacmeedka si aan ugu abuuro mid ka mid ah macaamiishayda sawirro warbaahinta bulshada ah waxaadna arki kartaa qaar ka mid ah alaabooyinka dhammaaday ee hoose. (Xusuusin: isku-darka sawirradan ayaa sidoo kale lagu sameeyay 'Photoshop')!)
Aaladda Hubiyaha Maamulka Bulk Domain
Shaqadayda suuqgeyntu waxay ku lug leedahay qiimeynta qiimaha bogagga kala duwan, iyadoo mid ka mid ah cabbiraadaha ugu muhiimsan ay tahay Maamulka Maamulka. In kasta oo ay jiraan qalabyo badan oo lacag la bixiyo oo aad isticmaali karto, haddana waxaan helay tan ugu fiican, uguna fudud uguna kalsoonida badan tahay aaladdan gaarka u ah websaydhka. Fikraddu waa sida ugu fudud ee ay u muuqato: waxaad nuqul ka sameysataa oo aad dhejisaa liistada degellada, waxaad calaamadeysaa sanduuqyada xogta aad rabto inaad hesho (Domain Authority, Page Authority, Moz Rank, IP Address), ka dibna waxaad sugeysaa natiijooyinka inay soo baxaan. hoose.
Tani way fiicantahay haddii aad samaynayso cilmi baaris websaydh ah adoo adeegsanaya Waraaqaha Google maxaa yeelay waad nuqulan kartaa oo si toos ah uga dhejin kartaa xaashida qalabka. Majiraan talaabooyin dheeri ah, kudaris mayo koomayaal - sameynta waxa caadi ahaan noqon kara shaqo caajis ah, aad ufudud una fududeyso. Sidoo kale uma baahnid xisaab, taas oo macnaheedu yahay inaad haysato hal lambar oo sir ah oo aad xasuusato.
Kaydka & Hootsuite
Loogu talagalay: Jadwalka iyo Dhageysiga Bulshada
Waxaan doonayay inaan ku daro labadan maxaa yeelay hada labadaba waan istcimaalaa oo waxaan u arkaa inay yihiin badeecado isku mid ah oo leh awoodo kaladuwan. Waxaa jira qalab badan oo mushaar la heli karo, qaar badan oo ka mid ahna waan isticmaalay, laakiin markay timaado qalab fudud oo bilaash ah, kuwani waa kuwa aan ugu jeclahay. Waa tan waxa aan ka jeclahay mid kasta:
jadwalka: Awoodda Buffer ee suuq-geynta waxyaabaha waa in ay nadiif tahay oo ay fududahay in la maro. Iyadoo aan lahayn interface interface, waxaad si fudud u arki kartaa waxa la qorsheeyay iyo kanaalada maran. Falanqaynta qalabkooda bilaashka ah waa mid aad u yar, laakiin wali qiimo leh.
Dhamaan bulshada: Hootsuite waxay u adeegtaa inbadan oo ah aalad guud oo dhageysi iyadoo aan laga badin. Waxyaabaha aan ugu jeclahay qalabkan ayaa ah inaan awood u yeesho inaan ku daro durdurrada si aan ula socdo tixraacyada, ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah ama xitaa farriimaha tooska ah ee xisaabaadka shaqsiyeed. In kasta oo ay waliba u adeegto sidii qalab jadwal u shaqeeya oo u shaqeeya sidii la filaayey, koontooyinka bilaashka ahi ma helaan marin falanqeyn ah.
Waxaa jira barnaamijyo liis garayn ah oo qorshaysan iyo wax-qabad badan waxayna igu qaadatay sannado inaan helo mid taas oo ah sida saxda ah ee aan raadinayay. Caqabada ku jirta barnaamijyada liistada waxa la samaynayo ayaa ah sida ay u kala dhib badan yihiin - in badan oo ka mid ah waxay u baahan yihiin hawl kasta inay lahaato taariikh la soo dhaafay, tusaale ahaan, ama isticmaal is-dhexgalyo adag oo hawlahaagu abaabulan yihiin maalintii, taasoo adkeyneysa in toddobaadkiina oo dhan hal mar la wada arko.
TickTick waa wax kasta oo aan raadinayey iyo in ka badan, waana ku habboon yahay suuqgeynta maaddada maamusha koontooyin badan ama macaamiil. Waa tan waxa ka dhigaya mid ku habboon suuq-geynta waxyaabaha ugu yar:
Dhamaan Tabta, waxaad ku arki kartaa shaqooyinka macmiil kasta hal mar. Macaamiil kastaa wuxuu u nool yahay “liis” u gaar ah, kaas oo ah waxa aad ku arkayso hoosta:
Waxaad sidoo kale fiirin kartaa liis kasta shaqsi ahaan, sidaa darteed markaad u gudubto maalintaada shaqada, waxaad awood u leedahay inaad diirada saarto hal macmiil oo keliya, taas oo kuu sahleysa inaad howsha kusii sugnaato adigoon ku mashquulin.
Muuqaalka koowaad ee aan raadinayo, si kastaba ha noqotee, wuxuu awood u leeyahay inaan iska hubiyo howlaha liistada. TickTick-ka, wax kasta oo liistada liistada liistada ka mid ah ayaa ku nool xagga hoose, taas oo ka dhigaysa mid fudud in lala socodsiiyo daneeyayaasha haddii loo baahdo, ama lala socdo waxa aad qabatay maalintaas.
Waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa tan qalab qalab qorshayn ah, liis ay ku qoran yihiin bil kasta iyo waxyaabaha aad qorshaynayso inaad abuurto. Sababtoo ah waxaad ku dari kartaa taariikhaha, qoraalada, heerka mudnaanta iyo sanduuqyada aagga sharraxaadda, waxaad awood u leedahay inaad si fudud u abaabulo faahfaahin kasta.
HARO iyo Caddayn
Ku: Helitaanka Ilaha
Mar labaad, waxaan doonayay inaan ku daro labadaba maxaa yeelay waxay u adeegaan ujeedo isku mid ah-laakiin aad ayey u kala duwan yihiin isla waqtigaas. HARO (Caawi wariye ka baxsan) waa ka yar qalab, iyo in ka badan adeeg, laakiin aad ayey qiimo iigu leedahay aniga ahaan suuqley ahaan maadama ay fududahay in la isticmaalo. Uma baahnid inaad sameysatid koonto haddii aadan rabin, dhammaan jawaabahaaga weydiintaaduna waxay ku imaan doonaan sanduuqaaga sanduuqaaga - halkaasoo aad horayba waqtigaaga intiisa badan ugu qaadatay. Haddii aad u baahan tahay inaad ka hesho ilo qoraal ah, waa sida loo sameeyo.
Clearbit waa hab kale oo lagu helo ilo, laakiin sidoo kale waxaan u isticmaalaa inaan kula xiriiro milkiilayaasha bogagga iyo daabacayaasha. Waxay ku nooshahay sanduuqaaga sanduuqa sanduuqa sida kudar ahaan, waxayna kuu ogolaaneysaa inaad raadiso xiriirada ku dhowaad degel kasta — dhammaan sanduuqaaga dhexdiisa. Maaddaama aan ahay suuqgeyaal wax ku qoro oo martida soo dira oo had iyo jeer xiriiriya tifaftirayaasha kale iyo suuqleyda, waxaan u isticmaalaa qalabkan maalin kasta.
Minimalist macnaheedu maahan waxtar la'aan
Uma baahnid inaad adeegsato qalab qalafsan oo qaali ah maxaa yeelay waa la heli karaa. In kastoo qaarkood laga yaabo inay lagama maarmaan u yihiin maareynta suuq-geynta waxyaabaha heer-ganacsi, haddii aad aniga oo kale tahay, maamulida xoogaa yar oo macaamiil ah, ama ka shaqeeya hal urur oo keliya, kuwan oo dhammi waxay noqon doonaan waxa aad u baahan tahay. Ku dar Google Drive (Waraaqaha iyo Dukumintiyada), Gmail iyo kuwa kale, waadna abaabuli kartaa waadna guuleysan kartaa adigoo aan ku lumin isku darka aaladaha isku dhafan.
Tags: bufferhubiyaha maamulka badancadeynGmailGoogle DriveWaraaqaha Googledesign graphichayehootsuitetafatirka photosawir qaadissawiro xcilmirobin guptailoshilinta
Jessica Thiefels waxay wax qoreysay in kabadan 10 sano waxayna hada tahay qoraa waqti-buuxa ah, lataliye suuq geyn iyo milkiile ganacsi. Waxay ka soo muuqatay Forbes iyo Business Insider waxayna u qortay Virgin, Manta, BPlans iyo inbadan.
Jadwalka Waqtiga Joogtada ah ee Istaraatijiyadaha Suuqgeynta Saameynta ee Hoteelada
Jan 31, 2018 at 11: 38 AM
Jessica, Waan jeclahay jeegga Maamulka ee aad sheegtay.
Maxaad sameysaa ka dib markaad gasho qiimaha boggaga internetka haddii aadan dhib ka qabin wadaagista?